Tallaabo noocee ah ayuu Farmaajo ka qaadi doonaa taliyaha xoogga ee leexiyey mushaarka Militariga? - Caasimada Online
Home Warar Tallaabo noocee ah ayuu Farmaajo ka qaadi doonaa taliyaha xoogga ee leexiyey...
Tallaabo noocee ah ayuu Farmaajo ka qaadi doonaa taliyaha xoogga ee leexiyey mushaarka Militariga?
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa dhawan soo baxday Fadeexop ku aadan inuu taliyaha Ciidamada Xogga Soomaaliya Jeneral Maxamed Aadan Axmed musuq maasuqay Mushaarka ciidamada Militariga Soomaaliya muddo gaareyso ilaa 13 bilood.
Taliyaha ayaa mushaarkaas u wareejiyey guuto ka tirsan ciidamada Puntland waxaana lagu tilmaamay inay tahay qiyaano aad u weyn oo mudan in laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan.
Waxay arrintaan so if baxday markii ciidamo ka tirsan Militariga ay banaanbaxyo waaweyn ka sameeyeen Magaalada Muqdisho iyagoo dalbanayey mushaarkooda oo ka maqan bilooyin badan.
Haddaba maadaama ay arrintaan soo baxday waxaa la is waydiinayaa tallaabada uu madaxweynaha ka qaadi karo Taliyaha xogga dalka oo arrintaan ku dhaqaaqay haddii si rasmi ah loo shaaciyo.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo horey ugu dhawaaqay inay dowladiisa si weyn ula dagaalami doonto musuq maasuqa ayaa la filayaa inuu xilka ka qaado Taliyaha ciidamada Xoogga sidoo kalana lasoo taago maxkamad ku saleysan cadaalad si aysan mar kale u dhicin qiyaano noocaan camal ah.
Lama oga tallaabada ay ka qaadi doonaan arrintan dowladda Farmaajo, balse waxay noqon doontaa mid lagu hubiyo daacadnimadooda iyo sida ay uga go’an tahay wax ka qabashada musuqmaasuqa baahay ee madaxda ciidamada iyo kuwa rayidka ahna.
Haddii ay arintaan si dhab ah u cadaato waxaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo hortaalo tijaabadii ugu horreysay oo ay mareyso dowladiisa waxayna noqon doontaa arrintaan mid saameyn weyn yeelato haddii aan wax laga qaban.